Akụkọ - Ọganihu Nchọpụta nke arụmọrụ nke uwe lubricant
Ọganihu Nchọpụta nke arụmọrụ Antiwear
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ndị nchọpụta achọpụtala na micro-nano ahụ dị ka ihe mgbakwunye nwere ike imezi ihe ndị na-ete mmanụ, mmiri mmiri dị ala na mgbochi ịkpụ nke ndị na-ete mmanụ. Ihe dị mkpa bụ na mmanu mmanu agbakwunye na micro-nano ahụ abụghịzi ọgwụgwọ dị mfe nke mmanu mmanụ na usoro mmanu ahụ, mana iji meziwanye nsị site na ịgbanwe ọnọdụ esemokwu n'etiti esemokwu esemokwu abụọ n'oge esemokwu ahụ. usoro. Mmepe nke mgbakwunye nwere ihe dị mkpa ọ pụtara. Maka ihe mgbakwunye siri ike, ọdịdị ọdịdị bụ o doro anya na ọ bụ ụdị echiche kachasị mma, nke nwere ike ịghọta mgbanwe site na esemokwu esemokwu na esemokwu eserese, si otú ahụ belata esemokwu na akwa ihu na oke kachasị. Dika usoro mmanu di iche iche nke mmanu mmanu mmanu, isiokwu a na-eleba anya na usoro nkwadebe nke micro-nano gburugburu na-adịbeghị anya na ngwa ha dị ka ihe mmanu mmanu, ma na-achikota usoro mgbochi mgbochi na mgbochi esemokwu.
Nkwadebe usoro nke * Tụkwasị micro-nano urughuru mmako
E nwere ọtụtụ ụzọ maka ịkwadebe ihe mgbakwunye micro-nano urughuru. Traditionalzọ ọdịnala gụnyere usoro hydrothermal, usoro mmiri ọgwụ, usoro sol-gel, na usoro irradiation laser na-apụta n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Ihe ahụ mepụtara site na usoro nkwadebe dị iche iche nwere akụkụ dị iche iche, ihe mejupụtara yana akụrụngwa, ya mere, ihe ndị na -eme mmanụ egosiputara dị ka ihe mgbakwunye na-adịkwa iche.
Usoro hydrothermal bụ usoro nke ịmepụta ihe sub-micron site na kpo oku na ịpị usoro mmeghachi omume n'ime ihe nrụgide mechiri emechi nke nwere ihe ngwọta mmiri dị ka usoro mmeghachi omume, na ịme mmeghachi omume hydrothermal na ọnọdụ dị elu na oke nrụgide. A na-eji usoro hydrothermal eme ihe n'ọtụtụ ebe n'ihi ezigbo sịntetik sịntetik na morphology na-achịkwa. Xie et al. jiri usoro njikọ hydrothermal iji tọghata Zn + n'ime Zn0 na gburugburu ebe obibi alkaline. Nlereanya egosiwo na ịgbakwunye ihe mgbakwunye organic triethanolamine (TEA) na ịhazigharị uche nwere ike ijikwa morphology nke zinc oxide particles, na-eme ya site na gịrịgịrị ellipse. Ọdịdị nke dị n ’ihu na-adị ọdịdị dị okirikiri. SEM na-egosi na a na-achụsasị ihe ndị ahụ Zn n'otu n'otu, yana nha nha nke ihe dịka 400m. Usoro hydrothermal dị mfe iwebata adịghị ọcha dị ka mgbakwunye n'oge usoro njikọ, nke na-eme ka ngwaahịa ahụ ghara ịdị ọcha ma chọọ ọnọdụ dị elu na ọnọdụ nrụgide dị elu, nke dabere na ngwa nrụpụta.
Nkwadebe nke ahịhịa micro-nano gburugburu na usoro mmanu ha dị ka ihe mgbakwunye mmanụ. , Usoro izizi dị irè na-agbakwunye site na ịgbakwunye micro ahụ bụ ịgbanwe esemokwu esemokwu n'ime esemokwu ntụgharị, nke bụ nsonaazụ micro, nke na-ebelata esemokwu na eyi.
A06,4th floor, Tianqin Building, No.702 Zhonghuabei Street, Congtai Dis.Handan Hebei